Xabbad joojin xiligeedii kusoo aaday (Qormo) – Radio Daljir
Xabbad joojin xiligeedii kusoo aaday (Qormo)
Agoosto 13, 2018 3:49 g 0
15, Agoosto 1984, ayaa la asaasay Jabhada Wadaniga xoreynta Ogadeeniya, (JWXO) (Ogaden National Liberation Front) waa ururkii ugu muddada dheera ee ka daggaalama Dhulka Soomaali Galbeed.
Bishii Janaayo sannadkii 1992dii ayaa Magaalada Garbo ee Gobolka Nogob waxaa lagu qabtay Shirwenihii koobaad ee Dalka Gudihiisa ay ku yeeshan ONLF.
Waxaana lagu dhisay Gole dhexe oo ka kooban 45 xubnood oo uu xog haye guud u ahaa ANH Shiikh Ibraahim Cabdalla Muxamed oo markii dambe noqday Guddoomiyaha Jabhadda JWXO.
22 Febraayo sannadkii 1994kii Ciidanka Malitariga Itoobiya ayaa weerar ku qaaday Guddoomiyihii
Jabhadda ONLF Shiikh Ibraahim Cabdalla Muxamed oo socdaal ku jogay Gobolka Doollo xaruntiisa Wardheer.
Lagasoo bilaabo 1994, Ururka hubaysan ee (ONLF) wuxuu bilabay daggaal hubaysan oo uu kala soo horjeeday Dawladda Itoobiya qadiyadda Jabhaddu waxay ahayd inay xornimo iyo madax Bannani garsiiyan Dhulka Soomaali Galbeed ee hada lamagac baxay Dawlad Deegaanka Soomaalida Itoobiya.
34,Sanno kadib Jabhadda Wadiniga Xoraynta Ogadeeniya waxay ku dhawaaqaday Xabbad joojin rasmiya taaso dhaqan gashay 12, 08/ 2018.
Waxan u aragnaa in Xabbad joojintu ay Dadkeenna maslaxad u tahay”, sidaa waxaa yiri Cabdulqaadir Xasan Hirmooge (Caddaani), afhayeenka ONLF, oo (BBC) u warramayey isagoo jooga Nairobi.
Xabbad joojinta ONLF) waxay kusoo aaday iyadoo siyaasaddii Dalka Itoobiya isbedel weyn ku yimid Ururka ONLF-na laga saaray liiska Ururada argagaxisada uuna furmay jawi wada hadal iyo isu soo dhawaasho dhanka Madaxda Itoobiya iyo Hoggaanka ONLIF.
Xabbad joojintu waxay kusoo aaday iyadoo Gobolka Soomaalida Itoobiya laga helay Shidaal cayriin Waana mida soo dadajisay in Ra’iisul wasaaraha Itoobiya oo Albaabada u furo dhamman Jabhaddihii Dawladda Itoobiya daggaalka kula jiray.
Xabbad joojinta Jabhadda (JWXO) waxay kusoo aaday iyadoo Waddamada Itoobiya iyo Eratariya oo daggaal muddo dheer socday lasoo afjaray lagana heshiiyey Itoobiyana ay ka tanaasushay Dhulkii la isku haystay, waxa xusud mudan in Jabhadda wadaniga xoraynta Ogadeniya ay Dawladda Eratariya gabbaad siin jirtay.
ONLF, Daggaalka ay muddada dheer kula jiren Itoobiya wuxuu sababay in Ismaamulka Soomaalidu noqdo dhul Ciidan Milatari xarumo u ah inta badan hase yeeshee 10kii sanno , ee ugu dambeysay Ismaamulka Soomaalida waxa laga asaasay Ciidan Boolis Milatar ah loona yaqan Liyuu boolis kuwas oo si xasaasi ah ula daggaalamay Jabhadda ONLIF, wiiqayna Dhaqdhaqaqii Jabhadda ee Dalka Gudihiisa ahaa.
Ugu dambayntii waxaa lasoo gaaray waqtigii ONLF ay Itoobiya la heshiin lahayd waxayna ku dhawaqeen Xabbad joojin iyo isu soo dhawaasho waxana la filaya in ONLF iyo xukumadda Itoobiya ay wada garan heshiisyo muhiima.
Soomaalidu waxay ku maahmaahda, haddii (Dhayda la wayo Ciirtu waa dhadhata oo dheylo waa subagsiin) waxan ula jeeda haddii Madax bannaani la wayey waa in (ONLF ) ay qeyb ka noqoto isbedelka Bariga Afrika ee loo raadinayo xasilooni iyo degganaasho si loo cirib tiro faqriga iyo colaadaha.
WQ/ Cabdinuur Faarax Maxamuud
Hay’adda tayodhowrka Puntland oo Garoowe kulan wadatashi ah ku qabatay (dhegayso)
Aqoonyahan Cabdirisaaq Axmed oo ka hadlay Caqabadaha Haysta dhalinyarada (dhegayso)